दलित सांसद भन्छिन, दलित भयकै कारण काठमान्डौमा कोठा पाईएन , – Ranga Darpan
दलित सांसद भन्छिन, दलित भयकै कारण काठमान्डौमा कोठा पाईएन ,
जेठ २१ – देशमा सामन्त वादको अन्त्य भयको भयपनी तेस्का जड झन् मौलाऊदै गयको देखिन्छ । , मान्छे भन्दा जनावर कुकुर र बिरालोलाई बिस्कुट खुवाउने काठमान्डौको शहरमा गनिन्छ ।
, मान्छे र मानव फरक अर्थ हुन् , तर राजधानीमा बस्ने केहि तेस्ता ब्याक्ति छन् जसको लागि अब १५ हेक्टरको भुकम्प आबस्यक देखिन्छ । चार जात क्षतिस वर्णको फुलबारी भनेर पृथिवी नारायण शाहाले घोसना गरेपनि तेस्को अर्थ कसैले बुजेनन संसार टेक्नोलोजीको प्रविधिको बिकाशमा लम्किन्छ । नेपाल जात जाति र धर्मको कुरा गर्छ ।
जसलाई जात भनेको के हो ? भन्ने थाहा छैन , ब्राह्मण, क्षेत्रि ,वैश्य ,शुद्र एसलाई भनिन्छ जात । तपाई कसमा पर्नुहुन्छ मुल्यांकन गर्नुस यसको अर्थ फरक छ । ,मलाई लाग्छ सायद नेपालीले यो कुरा कहिले बुज्दैनन । यसको लागि त सयौ वर्ष देखि सामाजिक रितिरिवाजमा रहेका मान्छे छन् जसले तेस्लाई कहिले मेट्न सक्दैनन ।
,देशमा जातिय कुरा अन्त्य हुन त ति सबै मर्न पर्छ र नयाँ पुस्ताको उदय हुनपर्छ । , यो पनि असम्भब छ यसको यौटामात्र विकल्प हो दलित भन्ने सब्द सब्दकोष बाट हटाउने । ,वा जति पनि दलितको नाममा नागरिकता बाँडीयको छ त्यो सबै थरको नाममा परिणत । ,
तेस्तै सानो हो या ठुलो यो गुनासो हेरौ ,
दलित भयकै कारण काठमान्डौको ठाँउमा कोठा नपायको सांसद कुलदेवी विश्वकर्माले सुनाईन । , छुवाछुतको भेदभाव झन् मौलाऊदै गयको उनको भनाई छ । , कुलदेवी भन्छिन ,सिक्षित मानिने राजधानीमा त छुवाछुत मौलाऊदो छ गाँउमा झन् के होला ।
, दलितले समयको भाँडा धोयपछी सफा हुन्छ रे । , दलित सुतेको ठाँउमा लिप पोत गर्ने पर्ने रे अनि चोखो हुन्छ । थुक्क जनावर हरु तिमि मान्छे होइनौ समाज र भविष्यका कलङ्क हौ । हामी दलित होइनौं शिल्पी हौं’ भन्दै विश्वकर्माले गुनासो पोखिन । अब दलित भन्ने शब्दनै हटाउनको लागि आ आफ्नो ठाँउ बाट पहल गर्न समेत कुलदेवीले आग्रह गरिनन् ।
काठमान्डौमा कोठा खोज्दा जात सोधछन दलित भने पछि कोठा दिन मान्दैनन। , तर जात लुकायर भने जति पनि पाँउछ। , दलिद भनेर हेपेमा संविधानमा कडा कार्बाहीको सुची तयार पारे पनि त्यो लेखाईमा मात्र सिमित छ, जसले गर्दा हाबी मुहाली गर्न पायका छन् ।
रिना थापाको हल्ला , कति दिन चल्ला ,,
गायिका सन्जीता भन्छिन मेरो सिर्जना चोरी किन गरियो ? म मुद्दा हाल्छु ,,